Teeknooloojii - BBC News Afaan Oromoo
Ameerikaan 'Fesbuukii dolaara biiliyoona 5 adabuufi'
Dhaabbati Fesbuukii iccitii dhuunfaaf eegumsa barbaachisaa gochaa hin jiru jechuun US himatte.
Dargaggoo Yaareed garuu karaadhuma YouTube fayyadamuun erga afaan Chaayinaa barate booda amma hojii turjumaanaa ittiin hojjataa jira. Mee turtii dargaggoo kana waliin taasifne kunooti dubbifadhaa..
Dhaabbati dhimma networkii biyyoota addunyaa qoratu 'InterNations' jedhamu qorannoo tibbana baaseen saffisa interneetii fi tajaajila 'online' qabaachuudhaan biyyoota sadarkaa 1ffaa hanga 5ffaa jiran adda baaseera.
Itoophiyaan qooda Itiyoo-telekom dhibbeentaa 49 gurguruuf
Mootummaan Itoophiyaa qooda Itiyoo-telekom dhibbeentaa 49 gurguruuf murteessee jira.
"Namni waa kalaqu kamuu rakkina keessa darburraa ka'uun ta'u danda'a'' kan jedhu Izaddiin Kamaal, attamiin akka hojii kalaqaa kana eegale BBC'tti himeera.
Teekinooloojii: Suuraa fayyadamuun appiin dubartoota qullaatti hambisu uggurame
Appilikeeshiniin moobaayilarraa suuraa dubartootaa qullaa akka ta'an gochuun agarsiisuu danda'a jedhame, kalaqxoota aappichaan hojiirraa dhorkame.
Waa'een biyya koiyyaa waan na gadduufan bilbila
Waa'een biyya kiyyaafi naannoon jiraadhuu wwan natti dhagahamuufan yeroo hunda bilbila
Waggoota 30 dhufanitti US keessatti walakkaan hojii roobotiidhaan dhalamu jedhu ogeeyyiin. Bill Gates mootummaan tajajiloota hawaasummaaf roobotonni gibira akka kaffalan barbaada.
Maxxansaa fi ergaawwan fayyadamtoota feesbuukii kan biraarratti dhiibbaa qabaachu mala jettanii amantan attamiin dhaabbata feesbuukitiif gabaasu akka dandeessan beektu? Kunoo dubbifadhaa.
Dhaabbanni 'Three' jedhamu tajaajilli 5G Agayya keessa jalqabuuf akka jiru beeksise
Dhaabbatichi tajaajila biroodbaandii Landanitti jalqabuun booda gara magaalota 25 baballisuuf akka jiru beeksiseera.
Maqaa sobaan warri jaalallee barbaadatan saaxilamuuf
Appilikeeshiniiwwan ittiin jaalalleen barbaadamu irratti kanneen maqaa jaalalaatiin soban adda baasuuf tajaajilu teknolojii haaraan beeksifameera.
Feesbuukiin fayyadamtoota biliyooona sadii maqaa sobaan fayyadaman uggure
Yeroo jalqabaaf ji'a Fulbaanaafi Sadaasaa keessatti iyyannoo godhameen fuula feesbuukiirra maxxansaalee haasa jibbinsaa qaban miliyoona tokko ol ta'an haqamanii jiru.
Dargaggeessi ganaa barnootasaa yunivarsitii barataa jiru tokko kaka'umsa mataasaatiin bidiruu akka bisikleetiitti peedaaliidhaan deemtu hojjate.